मलेसिया कस्तो देश हो ? - Malayakhabar
होम पेज फिचर मलेसिया कस्तो देश हो ?
मलेसिया कस्तो देश हो ?
एजेन्सी (क्वालालम्पुर):= मलेसिया एक दक्षिणपूर्वी एसियामा रहेको अधिराज्य , देश हो। मलेसिया एउटा् बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक समाज रहेको देश हो। मलेसियाको संस्कृति यहाँ बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति, भुमिपुत्रहरूबाट उत्पन्न भएको इतिहास रहेको छ।
अघिल्लो लेख क्रिकेटर डे भिलियर्सद्वारा खेलाडी जीवनबाट सन्यास।
पछिल्लो लेख म्यानचेस्टर युनाइटेडको ४-१ गोल अन्तरको लज्जास्पद हार।